ကိုပီတာရဲ့အတွေးပုံရိပ်များ: September 2012
အသက် ၄၅ နှစ်အောက် အမျိူးသမီးများ ခင်ပွန်း၊ ဆွေမျိူးအရင်းအချာ (ဖခင်၊ သား စသည်) များ
အဖေါ်အဖြစ်မပါပဲ ခရီးသွားခွင့် မရှိဟူသော မွတ်ဆလင်ဥပေဒအရ ဆော်ဒီနိုင်ငံသို့ နှစ်စဉ်ပြုလုပ်
သည့် ဟာ့ ဂ်ျ ပွဲတော်သို့ ဝတ်ပြုဆုတောင်းရန် ရောက်ရှိလာသည့် နိုင်ဂျီးယီးယားနိုင်ငံမှ အမျိူးသ
မီး အယောက် ၉၀၀ အား သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခဲ့ ပါတယ်...
၀တ်ပြုဆုတောင်းရန်သွားရောက်သူ နိုင်ဂျီးယီးယားနိုင်ငံသူ ၉၀ ယောက်အား ဆော်ဒီနိုင်ငံ၊ ဂျက်
ဒါမြို့ ၊ အဗဒူအဇစ် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်တွင် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ ရကြောင်း နိုင်ဂျီးယီးယားနိုင်ငံ
ဟာဂျီကော်မရှင်ကသတင်းပေးပို့ ဖေါ်ပြခဲ့ ပါတယ်...
၀တ်ပြုဆုတောင်ရန်သွားရောက်သူများအား ဆိုးဝါးသည့် အခြေအနေ၊ နေရာထိုင်ခင်းများတွင်
ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းထားတာမို့ တစ်ချိူ့ သောအမျိူးသမီးများအနေဖြင့် ဆေးကုသမှုခံယူရန် အရေး
ဆော်ဒီနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေအပိုဒ် ၅ အရ ဟာ့ ဂ်ျပြုလုပ်ရန်လျှောက်ထားသည့် အမျိူးသမီးများအနေ
ဖြင့် အရင်းနှီးဆုံးဆွေမျိူး ( မာရန်း ) တစ်ဦးဦးပါဝင်စေဖို့ လိုအပ်သလို တော်စပ်ပုံအထောက်အ
ထား စာရွက်စာတမ်းများကိုလည်း လျှောက်လွှာနှင့် အတူတစ်ပါတည်းတွဲတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်...
အသက် ၄၅ နှစ်အောက်ဆို အရွယ်မရောက်သေးသူလို့ ပဲသတ်မှတ်ရမလိုပေါ့ ...
အုပ်ထိန်းသူမပါပဲ ခရီးမသွားရဆိုတော့ လေ...
သို့ သော်လည်း အသက် ၄၅ နှစ်အထက်အမျိူးသမီးများအနေဖြင့် အနီးစပ်ဆုံးဆွေမျိူး၊ ခင်ပွန်း
မပါပဲ အုပ်စုလိုက်ဝတ်ပြုရန်လာရောက်မည်ဆိုပါက ခင်ပွန်းသို့ မဟုတ်၊ သား၊ အစ်ကို စသူများ၏
တားဆီးကန့် ကွက်ခြင်းမရှိကြောင်း သက်သေခံစာတင်ပြရန်လိုသည်ဟု အဆိုပါဥပဒေကဖေါ်ပြ
ဆော်ဒီနိုင်ငံဆိုင်ရာ နိုင်ဂျီးရီးယားသံအမတ်ကြီး အဘူဘာကာရှီဟူးဗူနူး ကတော့ အဆိုပါနိုင်ဂျီ
ယီးယား အမျိူးသမီးများအား ပြန်လည်လွှတ်ပေးပါရန် ဆော်ဒီနိုင်ငံခြားရေှးဌာနသို့ ကန့် ကွက်
တိုင်ကြားစာ တရားဝင်ပေးပို့ လိုက်ပါတယ်...
ဆွေမျိူးအစောင့် အရှောက်မပါသည့် အသက် ၂၅ နှစ် နှင့် ၃၅ နှစ်အတွင်းအမျိူးသမီးများအား
တားဆီးထိမ်းသိမ်းနေတာဖြစ်ပါတယ်... အသက် ၄၅ နှစ်ကျော်တွေကိုတော့ ဆော်ဒီအစိုးရကဂရု
မစိုက် အလေးမထားပါဘူး ဟု သံအမတ်ကြီး ဗာနူးကဆိုပါတယ်...
ဆော်ဒီနှင့် နိုင်ဂျီးယီးယားတို့ သဘောတူညီချက်အရ ဒေသခံဟာ့ ဂ်ျ ကော်မတီတာဝန်ရှိသူများ
အစောင့် အရှောက်ဖြင့် နိုင်ဂျီယီးယားအမျိူးသမီးများအနေဖြင့် မက္ကာမြို့ သို့ ဟာ့ ဂ်ျ ၀တ်ပြုဆု
တောင်းရန် လာရောက်နိုင်ကြောင်း နိုင်ဂျီးယီးယားနိုင်ငံ ဟာ့ ဂ်ျ ကော်မရှင်ကဆိုပါတယ်...
ဆော်ဒီသို့ ဝင်ရောက်လာသည့် ၎င်းတို့ ၏လင်ယောကျာင်္းများနှင့် မျိူးနွယ်နာမည်မတူသည့် နိုင်ဂျီး
ယီးယားအမျိူးသမီးများအားခင်ပွန်းဖြစ်သူများနှင့် အတူတစ်ကွလာရောက်ခဲ့ လျှင်တောင်မှ သက်
ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များက တားဆီးထိမ်းသိမ်းလေ့ ရှိတယ်လို့ အဆိုပါကော်မရှင်ရဲ့ အစီရင်ခံစာ
" အစ္စလာမ်ဘာသာတွင် ဇနီးမယားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ ၏ မိဘအစဉ်အဆက်နာမည်အားဆက်
လက်ထားရှိနိုင်ပြီး ခင်ပွန်းယောကျာင်္းများ၏အမည်အား ဖြည့် စွက်ရန်မလိုကြောင်း... " အဆိုပါအ
Saudi Arabian authorities have held more than 900 Nigerian women on the annual Hajj pilgrimage underalaw that prohibits women under 45 to travel withoutafirst-degree male relative. Nigeria’s National Hajj Commission has reported that 908 female pilgrims were held at King Abdulaziz Airport in the Saudi city of Jeddah.
The commission also stated that the pilgrims have been held in poor conditions, and some of them need “urgent medical attention.” According to Article5of the Saudi law on applications foraHajj visa, all women are required to travel for Hajj withaMahram (a first-degree male relative), and the proof of kinship must be submitted with the application form.
However, women over the age of forty-five may travel withoutaMahram with an organized group on the condition that they carryano objection letter notarized by husband, son or brother, authorizing the pilgrim to travel with the named group, the law stipulates. Meanwhile, Nigeria’s Ambassador to Riyadh Abubakar Shehu Bunu filedaformal complaint with the Saudi foreign affairs office, calling on Riyadh to release the Nigerian women.
“They are stopping women particularly between the ages of 25 and 35 withoutamale relative. Those over 45 are notaconcern to the Saudi authorities,” Bunu stated. The Nigerian National Hajj Commission also said that under an agreement between Abuja and Riyadh, Nigerian women could travel to Mecca for Hajj pilgrimage even if they were accompanied by local Hajj committee officials. Saudi authorities even stopped women who were entering the country with their husbands just because their surnames did not match those of their husbands, according to the commission report. “Islam allows wives to bear the names of their parents and not necessarily that of their husbands,” the report said.
Posted by peter kyaw | at 2:44 AM |0comments
Labels: news: presstv.com
15 Things You Didn't Know About the Brain
သေချာဖတ်ကြည့် ပါလေ....အံ့ သြဖွယ်ရာအချက်အလက်တွေလေ့ လာတွေ့ ရှိရပါလိမ့် မယ်...
Posted by peter kyaw | at 1:54 AM |0comments
ဘရာဇီးနိုင်ငံမှ ကျောင်းသူတစ်ဦးဟာ ပြည်နယ်တစ်ခုမှဆင်းရဲချိူ့ တဲ့ နေကြသည့် မိသားစုများ
နေထိုင်နိုင်ရန် အိမ်များဆောက်လုပ်ပေးမည့် ပရဟိတရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ထူထောင်နိုင်ရန်အတွက်
သူမရဲ့ အပျိူစင်ညကို လေလံတင်ရောင်းချလျှက်ရှိနေပါတယ်...
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိ ကာတာရီနာ မစ်ဂလီယီုရီနီ ဟာယခု ဈေးပြိုင်ခေါ်ဈေး ဒေါ်လာ ၁၅၅၀၀
အထိရောက်နေပြီဖြစ်သည့် ထိုလေလံပွဲမှရသည့် ငွေအားလုံးအား ဘရာဇီးနိုင်ငံ တောင်ပိုင်းမှ
သူမနေထိုင်ရာ ဆန်တာကာတာရီနာ ပြည်နယ်တွင်အစိုးရမဟုတ်သည့် အဖွဲ့ အစည်းမှတာဝန်ယူ
လှူဒါန်းဆေက်လုပ်မည့် ဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားများအတွက် (တန်ဖိုးနည်း )ခေတ်မှီအိမ်ရာစီမံကိန်း
သူမဟာ ကြေးစားပြည့် တန်ဆာတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များအားငြင်းဆန်ယင်း
သူမအနေဖြင့် အချစ်စစ်အချစ်မှန်အားယုံကြည်လျှက်ရှိနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သို့ သော်လည်းယခု
အခွင့် အလမ်းလုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် ကမ္ဘာကြီးအား ပိုမိုသာယာကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးရာ
တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့် အဖြစ်မှတ်ယူပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ ပါတယ်....
ကမ္ဘာမြေသာယာစေဖို့ ...လာပါလေ အစ်ကိုတို့ ရယ်လို့ ...
လှစ်ဟကာသူကြွေးကြော်... ပေးပါနော်အမြင့် ဆုံး... စပွန်ဆာမလို ...အကြင်နာပိုတဲ့ သူလေး...
Good deed? Catarina Migliorini had rejected claims she isaprostitute, saying she saw the opportunity to makeapositive difference to the world
သို့ သော်လည်း ကြံ့ ခိုင်ရေးပညာရပ်ဆိုင်ရာကျောင်းသူလေးဟာ သူမရဲ့ အာဝါဟလုပ်ပြီးလှူ
မယ့် အာဝါသ အလှူပွဲအတွက် သြစတေးလျရုပ်သံရိုက်ကူးရေးအဖွဲ့ ရဲ့ "အပျိူစင်လိုချင်ပါတယ်.."
အမည်ရှိ မှတ်တမ်းတင်ရုပ်သံအစီအစဉ်အား လက်ခံရိုက်ကူးပေးမှာမို့ အငြင်းပွားဖွယ်ရာတွေ
" ကျွန်မကတော့ ဒါကို (မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်ကို) စီးပွားရေးဆန်ဆန်ကိစ္စတစ်ခုလို့ မြင်ပါတယ်...ဒီမှတ်
တမ်းရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ အတွက် ကျွန်မအနေနှင့် ခရီးသွားဖို့ အခွင့် အလမ်းတွေရမယ်... မှတ်တမ်းရုပ်
ရှင်မှာပါဝင်ခွင့် ရတဲ့ အပြင် အပိုဆုကြေးလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်...
ဘ၀မှာတစ်ကြိမ်တစ်ခါပဲ ( အခကြေးငွေယူပြီး အမျိူးသားနှင့် အတူအိပ်စက်ပျော်ပါးခြင်း ) ပြုလုပ်
တာမို့ ပြည့် တန်ဆာတစ်ယောက်အဖြစ်မသတ်မှတ်နိုင်ပါဘူး.... ဓါတ်ပုံကောင်းလေးတစ်ပုံရိုက်ခဲ့ 
လိုက်ရုံနှင့် ဓါတ်ပုံဆရာအဖြစ်မခံယူနိုင်လိုသလိုပါပဲ..." လို့ သူမကရှင်းပြခဲ့ ပါတယ်...
"လေလံပွဲဆိုတာလည်းစီးပွားရေးသဘောဆန်ဆန်လုပ်တာပါပဲ... ကျွန်မဟာ အချစ်ကိုကိုးကွယ်
ယုံကြည်တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးပါ... ဒါပေမယ့် ဒီအတွက်ကြောင့် လည်းကျွန်
မအနေနှင့် အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲရပါလိမ့် မယ်...." လို့ သူမက ဖိုလ်ဟာ သတင်းစာကိုပြော
အီတလီအဆက်အနွယ်ဖြစ်သည့် ကာတာရီနာဟာ ထိုရုပ်သံအစဉ်အစဉ်အား လွန်ခဲ့ သည့် ၂ နှစ်
ခန့် က သောမတ်စ်ဝီလီယံ ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ အပျိူစင်တစ်ဦးအား ရိုက်ကူး၇န်ရှာ
ဖွေနေစဉ်သိရှိခဲ့ ပြီး ပါဝင်ရန်သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
ဒါရိုက်တာ ဂျပ်စ်တင်စစ်စ်လေအနေဖြင့် သူမအား ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ချစ်တင်းမနှောခင်နှင့် 
ချစ်တင်းနှောပြီးနောက် သူမရဲ့ စိတ်ခံစားမှုများအား မှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်...
လူပျိူအစစ်အဖြစ်ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်ရန် အချစ်ရေးတွင်အတွေ့ အကြုံမရှိဘူးသေးသည့် လူ
ပျိူလေး အလက်ဇန္ဒား ကိုလည်းရွေးချယ်ထားပါတယ်...
အကျယ်ချဲ့ မဲ့ ကိစ္စမို့ အကျယ်အကျယ်၊ အငြင်းပွားဖွယ်တွေဖြစ်မှာအမှန်...
Controversial: The physical education student will be followed every step of the way by an Australian film crew
အလှူဒါန ပြုကြသူငါလို့ မပြောရဲလောက်တဲ့ သူမရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ 
ကောင်းပေမယ့် ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ လုပ်နည်းလုပ်ဟန်ကတော့ ...
Charitable: Catarina Migliorini says the money will be spent on building houses for the poor. Pictured isashantytown in Rio de Janeiro
အောက်တိုဘာလ ၁၅ ရက်နေ့ တွင်အဆုံးသတ်မည့် ထိုလေလံပွဲမှ ငွေ၏ ၉၀ ရာခိုင်နှုံးဖြစ်သည့် 
ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ အား သူမအနေနှင့် ရရှိမည်ဖြစ်ပါတယ်...
လေလံပွဲတွင် ဈေးအမြင့် ဆုံးပေးသူအား အပျိူစင်မလေးနှင့် ချစ်တင်းမနှောမှီ ကာလသားရောဂါ
ရှိမရှိ ဆေးစစ်မှာဖြစ်ပြီး ပြည့် တန်ဆာဥပဒေအားရှောင်ရှားကျော်လွှားနိုင်ရန် သြစတေးလျမှ အ
မေရိကသို့ သွားသည့် လေယာဉ်တစ်စင်းပေါ်တွင် ဝေဟင်တွင်ဆင်နွှဲသည့် အချစ်ပွဲ ကိုပြုလုပ်ကြ
လိင်ဆက်ဆံရာတွင် ရာဘာအစွပ်ကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ကာတာရီနာကတော့ သူမအ
နေဖြင့် အချစ်ရေးနှင့် ပါတ်သတ်ပြီး ယခင်ကလုံးဝအတွေ့ အကြုံမရှိခဲ့ တာသေချာကြောင်း သက်
သေပြဖို့ အသင့် ပြင်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်...
ဒါကတော့ ကလေးမရဲ့ ကြေငြာဗီဒီယိုကလစ်လေးပါ...
အ၀တ်အစားတွက်၊ ဖုံးတစ်လုံး၊ တက်ဘလက်တစ်ခု၊ ကားတစ်စီးအတွက် စပွန်ဆာရှာကြတာ
ထက်စာယင် အများအကျိူးအတွက်စစ်စစ်ဆိုယင်တော့ ဒီလိုလုပ်တာမဆိုးဘူးလို့ ပဲဆိုရမှာပေါ့ ...
A Brazilian student is auctioning off her virginity to the highest bidder to raise cash to build homes for poverty-stricken families.
Catarina Migliorini, 20, is set to plough the money - currently standing at $155,000 (£95,400) - intoanon-governmental organisation which will construct modern houses in her southern Brazilian home state of Santa Catarina.
Rejecting claims she isaprostitute, she said she still believed in love but saw the opportunity to makeapositive difference to the world.
But the physical education student has sparked controversy because she will be followed every step of the way by an Australian film crew foradocumentary film called Virgins Wanted.
She said: 'I saw this asabusiness. I have the opportunity to travel, to be part ofamovie and getabonus with it.
Catarina, who is of Italian descent, signed up to the project two years ago when she saw an advert by Thomas William Productions looking foravirgin to film.
Director Justin Sisely will record her emotions before and after her first sexual encounter. A male virgin called Alexander is also being followed.
She will receive $20,000 and 90 per cent of the final auction sale price, which ends on October 15.
The winner will be tested for sexually transmitted diseases prior to the encounter which will take place on an aeroplane, leaving from Australia to the US, inabid to circumvent prostitution laws.
A condom will be compulsory, with Catarina saying she was prepared to prove to any sceptics that she has not had sex before.
Posted by peter kyaw | at 2:53 AM |0comments
Labels: news: daily mail.co.uk
Varieties of Photos
အဓိပ္ပါယ်ရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံဟာ စကားလုံးပေါင်းမြောက်များစွာကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ ဆိုလေ
တာမို့ ဘလော့ဂ်ကြွလာပ၇ိတ်သတ်များ အပျင်းပြေစေ၊ အတွေးရစေဖို့အင်တာနက်က တွေ့ မိ
သမျှ ၊ ဖေ့ စ်ဘွတ်မှာတွေ့ မိတာ၊ တစ်ချိူ့ လည်း ဖော်ဝါ့ ဒ်မေးကရတဲ့ ပုံလေးတွေတင်ပြလိုက်ပါ
အောက်ကစာသားများကတော့ မိမိရဲ့ စိတ်ကူးအတွေးများမို့ တစ်ခါတစ်လေမူရင်းပုံနဲ့ ရည်ရွယ်ရာ
ဖြည့် စွက်၊ ဖြန့် ထွက်တွေးပြီး ပြုံးပျော်နိုင်ပါစေသတည်း...
မူရင်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးသူကိုဖော်ပြပြီးဂုဏ်မပြုနိုင်ပေမယ့် ထိုပုံများရိုက်ခဲ့ ပြီးကိုယ်ကျိူးမဖက်ပဲ အင်တာနက်မှာ တင်ထားနိုင်တာကိုက နည်းတဲ့ စိတ်ထားမြင့် မြတ်မှုမဟုတ်ပါဘူး....
မူရင်းရိုက်ကူးသူမသိပဲ ကြားကတစ်ယောက်ယောက်က ကူးတင်တယ်ဆိုယင်တော့ လည်းမ
တတ်နိုင်ပေဘူးပေါ့ ...သို့ သော်စီးပွားရေးအရမဟုတ်ပဲ ၀ါသနာအရ၊ အပျော်ဗဟုသုတအနေနဲ့ 
တင်တာမို့ သိခဲ့ လျှင်တောင်မှခွင့် လွှတ်နိုင်မယ်ထင်ပါတယ်...
ထိုထိုဓါတ်ပုံဆ၇ာများကို လေးစားစွာ ဂုဏ်ပြုပါတယ်...
ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ ပုံတော့ တစ်ပုံမှမပါဝင်ပါဘူး...
စိတ်ဖိစီးမှုအားလျော့ ပါးသက်သာစေသော အစားအစာများ...
အဓိကအကျဆုံး State Holder ဆိုတာ ဘယ်သူလည်း...
နောက်ဆုံးတော့ လည်း ပြည်သူသည်သာအမိ၊ ပြည်သူသည်သားအဖ ပါပဲ...
တစ်ကယ်တော့ သမာဓိသက်သက်နဲ့ အမြင်မှာ လူကို ရုပ်နာမ်အဖြစ် မခွဲနိုင်သေးပါဘူး...
ပညာဆိုတဲ့ သဘောပါမှသာ ရုပ်ပဲနာမ်ပဲ ခွဲမြင်နိုင်လာတာဖြစ်ပါတယ်...
အဆင့် မြင့် မြင့် စီးနင်းလိုက်ပါမယ်...
ငယ်ဘ၀အောက်မေ့ မိတယ်ပေါ့ အဘ...
အာရောဂျပရာမာလာဘာ လေနော်...တစ်နေ့ ၅ မိနစ်ကြည့် ရုံနဲ့ ကျန်းမာရေး
မှန်မကယ်ယင်ဖြင့် ဥာဏ်ကွယ်လိမ့် မယ်မလွဲ...
အခြောက်ကိုအစိုထင်... လိုအင်တွေပိတ်ဖုံး...ကမ္ဘာမြေဆိတ်သုန်းမယ့် ခေတ်...
အဆိုးမြင်...အကောင်မြင်... လက်တွေ့ ကျကျသုံးသပ်လျှင်...
( ကမ္ဘာ့ ကြီးရဲ့ ဘယ်နေရာကိုပဲကြည့် ကြည့် အများစုကတော့...) Selective Democracy ပင်....
ထူးဆန်းထွေလာ နာနတ်သီးရဲ့ အသံထွက်ကမ္ဘာ....
နှလုံးသားအရေးပေါ်အခြေအနေနဲ့ ကြုံလာယင် ဦးနှောက်ဆိုတဲ့ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
သူတို့ မှ မုန့် ဟင်းခါးချစ်သူအစစ်...
ကိုယ့် ကံနဲ့ ကိုယ် ထိုက်တန်တဲ့ ဟာရမယ်တဲ့... တယ်ဟုတ်တဲ့ စာပဲ...
လူနဲ့ ခွေးနဲ့ အမြင်ချင်းတော့ ဘယ်တူလိမ့် မတုံး...
ထို့ အတူပဲ လူ့ တိရိစ္ဆာန်လို့ ဆိုရမယ့် လူတွေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့ ဘာသာတရားရဲ့ အဆုံးအမရသူ
တွေနဲ့ ယဉ်ကျေးတဲ့ လူမှုအသိုင်းအ၀န်းကလူတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်အမူအကျင့် 
Posted by peter kyaw | at 2:29 AM |0comments
Labels: photos:fun/ knowledge
Don't Judge Anyone Before You Know Them
အသေအချာမသိခင် အဆုံးအဖြတ်မစောပါစေနှင့် ....
အချိန်ပေးရကျိူးနပ်ပြီး...သင့် အတွက်အကျိူးရှိပါလိမ့် မယ်...
အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ်လောက်ရှိမယ့် လူငယ်တစ်ဦးဟာ ခုတ်မောင်းနေတဲ့ မီးရထားပြတင်း
" ကြည့် ပါဦးအဖေရယ်.... ( ရထားသွားတော့ ) သစ်ပင်တွေက တစ်ရိပ်ရိပ်နဲ့ နောက်မှာကျန်နေ
ဖခင်ဖြစ်သူက ကြေနပ်နှစ်သိမ့် စွာပြုံးနေခဲ့ တယ်... သူတို့ သားအဖအနီးမှာ ထိုင်နေတဲ့ ဇနီး
မောင်နှံတစ်စုံကတော့ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် လူငယ်ရဲ့ ကလေးငယ်တစ်ယောက်လိုပြုမူပြော
ဆိုနေတဲ့ အမူအယာကို သနားတဲ့ ပုံစံနဲ့ ကြည့် နေကြပါတယ်...
တဆက်တည်းပဲ လူငယ်ကဆက်ပြီး...." အဖေရေ.... တိမ်တွေကလည်း ( ရထားနဲ့ အတူ ) သား
တို့ နဲ့ အတူတူ လိုက်ပြီးပြေးလာနေသလိုပဲနော်..." လို့ တစ်အံ့ တစ်သြခံစားရပုံနဲ့ ပြောနေပြန်ပါ
လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံး မမြိုသိပ်နိုင်တော့ ပဲ ဖခင်ဖြစ်သူကို... " ဦးလေးရဲ့ သားကိုဆရာဝန်
လးဘာလေး ( စိတ်ရောဂါကုဆရာဝန် ) ပြမကြည့် ဘူးလား ..." လို့ မေးလိုက်ပါတယ်...
" ဟာ... ပြတာပေါ့ ... အခုပဲ ငါတို့ ဆေးရုံကပြန်လာကြတာလေ... ဦးလေးရဲ့ သားကမွေးက
တည်းက မျက်စေ့ မမြင်ရှာဘူး.... အခုမှ မျက်စေ့ ခွဲစိတ်ပြီးလို့ ဒီနေ့ ပဲဆေးရုံကဆင်းလာတာ..."
လို့ ဖခင်ဖြစ်သူက ပြုံးပြီးပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်...
လောကကြီးမှာ ဖြစ်ပေါ်လာသမျှ အခြေခံအကြောင်းတရားဆိုတာရှိစမြဲမို့ လူတိုင်းမှာလည်းသူ့ 
ဒါကြောင့် အကြောင်းရင်း၊ အခြေအနေမှန်ကိုမသိပဲ လူတွေကို ချက်ခြင်းမဆုံးဖြတ်၊ မဝေဖန်
အဖြစ်အပျက်အမှန်၊ အကြောင်းအရင်းအမှန်ကို သင်သိလိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာ သင့် အံ့ သြသွားရ
လိမ့် မယ်...သင်နောင်တရသွားနိုင်လိမ့် မယ်...
Please take few seconds to Read this story.. It’s Worth..
A 24 year old boy seeing out from the train’s window shouted...
Dad smiled andayoung couple sitting nearby, looked at the 24 year old’s childish behavior with pity, suddenly he again exclaimed...
The couple couldn’t resist and said to the old man...
The old man smiled and said....
“I did and we are just coming from the hospital, my son was blind from birth, he just got his eyes today.”
Posted by peter kyaw | at 2:25 AM |0comments
Labels: motivation :
'They both seem to control it:' Family finds snake with TWO HEADS - one on each end of its body
ထူးခြားဆန်းကြယ် ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် မြွေ...
အဖြစ်ကတော့ ရှေးခေတ်ဟောင်းကျမ်းစာ၊ ပုံပြင်တွေထဲကနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ...
ဒါပေမယ့် တောင်ကာရိုလိုင်းနားမှ မိသားစုတစ်ခုကတော့ ၎င်းတို့ အိမ်တွင်တွေ့ ရှိခဲ့ ရသည့် 
ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် မြွေဆိုတာကတော့ တစ်ကယ့် အစစ်အမှန်ပါလို့ ဆိုပါတယ်...
ခေါင်းတစ်လုံးနှင့် တစ်လုံးအတူယှဉ်ကာရှိနေသည့် ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် မြွေများကိုတော့ တောထဲ
တွင် တွေ့ ခဲ့ ကြရပြီးဖြစ်ပေမယ့် ယခုကဲ့ သို့ ခန္ခာကိုယ်၏ ထိပ်တစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် ခေါင်းတစ်
လုံးစီရှိနေကာ ထိပ်တစ်ဖက်ဆီအလှည့် ကျစီမံဦးဆောင်နေသည့် ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် မြွေကတော့ 
ယခုမှတွေ့ ရှိခဲ့ ကြရတာဖြစ်ပါတယ်...
ခေါင်းတစ်ခုစီတွင် မျက်လုံးနှစ်လုံးနှင့် အလျှင်အမြန်ထုတ်လိုက်သွင်းလိုက်လုပ်နေသည့် လျှာတစ်
ထူးတာတွေထက်ဆန်းရမည်... ဦးခေါင်းနေရာမှာရော အမြီးနေရာတွင်ပါ ခေါင်းတစ်လုံးစီ
ပါဝင်သည့် ထူးခြားဆန်းကြယ်သည့် မြွေမျိူးကတော့ တစ်သက်မှာတစ်ခါပင်တွေ့ ဖို့ မလွယ်ချေ...
Head of snake: While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one hasahead on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control
အဆိုပါခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် မြွေငယ်ကို ဆဗန်နာလိုဂန်နှင့် သူမ၏မောင်ငယ် ပရက်စတန်တို့ ရဲ့ နေ
အိမ်တွင် အလုပ်သမားများကတွေ့ ရှိခဲ့ ကြတာဖြစ်ပြီး မောင်နှမနှစ်ယောက်ကတော့ ထိုမြွေလေး
ကလေးနှစ်ယောက်ကတော့ လွန်ခဲ့ သည့် ရက်သတ္တပါတ် သုံးပါတ်ကတွေ့ ခဲ့ သည့် အဆိုပါ၎င်း
တို့ ရဲ့ အချစ်တော်တိရိစ္ဆာန်ကလေးကို ကျောင်းသို့ ယူဆောင်သွားကာ သူငယ်ချင်းများကို ပြသ
အဆိုပါမြွေထူးဆန်းအားလည်းအထက်တန်းကျောင်းရဲ့ ဇီဝဗေဒဌာနမှ (တီကောင်ကဲ့ သို့ )မြေ
တွင်းအောင်း မြွေမျိူးစိတ်တစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုသတ်မှတ်ပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ကလေးများရဲ့ မိခင် တီနာစတီးဝပ် ကတော့ မြွေရဲ့ ခေါင်းတစ်လုံးက တစ်ခြားဖက်ထက်ပိုကြီးနေ
ပြီး အဆိုပါခေါင်းကြီးသည့်ဖက်က ( မြွေရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုများကို ) ပိုမိုထိန်းချူပ်ဦးဆောင်နေ
ပုံရပေမယ့် နှစ်ဖက်စလုံးကတော့ ထိန်းချူပ်လှုပ်ရှားနေတာပါပဲ ဟုသတင်းဌာနအားပြောကြားခဲ့ 
တီကောင်အရွယ်သာသာရှိတာမို့ အဆိပ်မရှိ၊ အန္တရယ်မပြုတဲ့ တီကောင်မြွေလို့ အမျိူးအစား
Cuddly: The small snake has been identified asarough earth snake, which are not dangerous to humans
ခေါင်းကြီးတဲ့ ဖက်က တစ်ခုခုလုပ်ယင် တစ်ခြားခေါင်းဖက်ကလည်း ဆန့် ကျင်ဖက်ကိုသွားဖို့ ကြိုး
စားနေတတ်ပါတယ် လို့ လည်းသူမကဆက်ပြီးပြောပြခဲ့ ပါတယ်...
ခေါင်းနှစ်လုံးပါရှိသော်လည်း အဆိုပါမြွေမျိူးဟာ အဆိပ်လည်းမရှိ လူတွေကိုလည်းအန္တရယ်မပြု
၎င်းတို့ ရဲ့ အဓိကအစားအစာကတော့ တီကောင်များ ပိုးမွှားများဖြစ်ပြီး ကိုးလက်မမှ တစ်ဆယ့် 
မြွေကလေးကိုတွေ့ တာသမီးတို့ တော့ ဟန်ကျတာပဲ...ကျောင်းကိုယူသွားပြီး အားလုံးကို
Show and tell: Savanna Logan, right, and her brother Preston, left, are fascinated by the animal, and have been bringing it to school to show off to their friends
ခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့ မြွေက တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ခေါင်းနှစ်လုံးက တစ်ဖက်တစ်ချက်ဆီသွားဖို့ အားပြိုင်
နေသလို ဆဗန်နာနဲ့ မောင်လေး ပရက်စတန် တို့ ကလည်း မြွေကလေးကိုနာမည်ပေးဖို့ အားပြိုင်
ပရက်စတန်က မြွေကလေးကို ဘီလီဘော့ ဘ် လို့ အမည်ပေးချင်ကြောင်း ပြောခဲ့ ပြီး သူ့ ရဲ့ အစ်
မ ဖြစ်သူကတော့ အိုရီယို လို့ အမည်ပေးချင်ကြောင်းပြောခဲ့ ပါတယ်...
တီကောင်နဲ့ ပိုးမွှားလေးတွေစားလေ့ ရှိပြီး ကိုးလက်မ ကနေ တစ်ဆယ့် လေး လက်မအထိ
Hiss: The rough earth snake's primary food source is earthworms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches
ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့ မြွေ နှစ်မျိူးစလုံးရဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်လေးများပါ...
It may sound like something out of an ancient text, butaSouth Carolina family says the two-headed beast they have found at their home is very real.
While snakes with two heads alongside each other have been found in the wild before, this one hasahead on each end of its body - and they appear to take shifts on which one is in control.
Each head has two eyes andafast-moving tongue.
Fox Carolina reported that the small snake was found by workers at the home of Savanna Logan and her brother Preston, who are fascinated by the animal.
The kids say that they have been parading their special new pet at school to show off to their friends since it was found about three weeks ago.
The snake has been identified by the biology department at nearby Ware Shoals High School asarough earth snake.
The children's mother, Tina Stewart, told Fox Carolina: 'One head’s is bigger and more dominant than the other, but they both seem to control the body.'
She added: 'The main head will do one thing and then the other part’s trying to go in the opposite direction.'
Even with two heads, the rough earth snake, or Virginia striatula, is not poisonous or considered dangerous to humans.
Its primary food source is earth worms and small arthropods, and it ranges in size from nine to 14 inches.
But while the snake pulls itself in opposite directions, young Savanna and Preston are also pulled in different directions on what to name the snake.
Preston told Fox Carolina: 'I want to name it Billy Bob.'
His sister chimed in: 'I'll just name it Oreo.'
Posted by peter kyaw | at 2:13 AM | 1 comments
ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေယင်း... ဆင်မယဉ်သာလေးရဲ့ အနင်းအနှိပ်လေးနဲ့ ဆိုယင်ဘ၀ဟာပိုပြီး
ပြည့် စုံသွားမှာပေါ့ ...
Posted by peter kyaw | at 2:51 AM |0comments
Labels: general knowledge: fun: video clip
Oldest Gymnast, Tallest Dog Enter New Guinness World Records
လက်မောင်းအ၀ိုင်း ၂၅.၅ လက်မ ရှိတာမို့ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးလက်မောင်းကြွက်သားပိုင်ရှင်ပါ...
In case you were wondering, Moustafa's slightly unnerving guns measure an incredible 25.5in (around 65cm) in circumference.
အရပ်အမြင့် ၄၄ လက်မ ( ၃ပေ ခွဲကျော် ) နှင့် မြင်းတစ်ကောင်အလားမြင့် မားသည့် 
His height? An amazing 44in (around 112cm) from foot to withers. (We're assuming someone's already double-checked he's not actuallyahorse.)
မိတ်ဆွေတို့ ....ကမ္ဘာ့ ထူးဆန်းမှတ်တမ်း၊ ဂင်းနက်စ်စံချိန်စာအုပ် ၅၇ ကြိမ်မြောက်တည်းဖြတ်ခြင်း
ကိုထုတ်ဝေဖြန့် ချီလိုက်ပြီမို့ ကမ္ဘာ့ ရောင်းအကောင်းဆုံးစာအုပ်ရဲ့ အထူးအဆန်း၊ အရူးအနှမ်းစံ
ချိန်တင် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမှတ်တမ်းတင်ထားတာတွေ လေ့ လာမှတ်သားဖတ်ရှုနိုင်ပါပြီ...
ယခုနောက်ဆုံးထုတ်ဝေလိုက်သည့် တည်းဖြတ်ခြင်းတွင် ယခင်ကထည့် သွင်းထားခြင်းမရှိသေး
သည့် စံချိန်သစ်များလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
စံချိန်သစ်တွေထဲမှာတော့ ဂျာမနီနိုင်ငံမှ အသက် ၈၆ နှစ်အရွယ်ရှိ ကာယဗလ၊ကြံ့ ခိုင်ရေးနည်း
ပြဆရာမကြီး ဂျိူဟန်နာကွာ့ စ် ကတော့ ပုံထဲမှာမြင်ရတဲ့ အတိုင်းကမ္ဘာ့ အသက်အကြီးဆုံး ကျွမ်း
တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်မွေးဖွားခဲ့ သည့် မူစတာဖာအစ္စမေးလ် အမည်ရှိအမျိူးသားက
တော့ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံးလက်မောင်းကြွက်သားရှိသူအဖြစ် ချီးမွမ်းအံ့ သြခြင်းခံရ၊ မှတ်တမ်းတင်ခံ
ခဲ့ ရပါတယ်... အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ မီချီဂန်မှ ဂရိတ်ဒိန်းခွေးကြီး ဇုကတော့ ကမ္ဘာ့ အရပ်အမြင့် ဆုံး
Listen up, everyone! Guinness World Records has just launched the 57th edition of its best-selling book of unusual - and, frankly, sometimes unnecessary - global achievements. And this latest version includes recognition for some never-before-recorded accolades.
Among them? There's 86-year-old Johanna Quaas,aretired PE teacher from Germany, who - as you may be able to guess from her picture above - is thought to be the world's oldest gymnast. Way to go, Johanna!
Meanwhile, Egyptian-born Moustafa Ismail has been rightly applauded for having the largest biceps and triceps on the planet...
And Zeus,aGreat Dane from Michigan, US, is now officially the world's tallest dog...
Posted by peter kyaw | at 2:14 AM |0comments
Labels: The Huffington Post UK
88-year-old man fined for hitting son, 65, with broom
ဂျာမနီနိုင်ငံမှ အသက် ၈၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ပင်စင်စားအဘိုးတစ်ဦးက သူ့ ရဲ့ သားဖြစ်သူ ပင်စင်စား
တစ်ဦးကို တံမြက်စည်းနဲ့ ရိုက်နှက်ဆုံးမမိခဲ့ တဲ့ အတွက်ဒါဏ်ငွေ ပေါင်စတာလင် ၂၀၀၀( ဒေါ်လာ
၃၀၀၀ ခန့် )ပေးဆောင်ဖို့ လက်ခံသဘောတူခဲ့ ပါတယ်...
" ကျွန်တော်သာဆိုယင်တော့ တရားရုံးကို အခုလိုအဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုအတွက် (ရုံးရောက်၊
ဂါတ်ရောက်) ဖြစ်ရတဲ့ အတွက် ရှက်မိမှာဖြစ်ပါတယ်..." လို့ တရားသူကြီးမင်းက ၎င်းတို့ သားအဖ
အဆိုပါ ဖခင်ဖြစ်သူအား ရာဝဇ၀တ်မှုမြောက်သည့် ကိုယ်ထိလက်ရောက်စော်ကားမှုအဖြစ် ဂျာ
မနီးနိုင်ငံ၊ ဖာစတင်ဖက်ဘရပ် မြို့ တရားရုံးမှ လွန်ခဲ့ သည့် ဒီဇင်ဘာလက ဖြစ်ပွားခဲ့ သည့် ဖြစ်ရပ်
အတွက် ဒါဏ်ငွေပေးဆောင်စေရန်အမိန့် ချမှတ်ခဲ့ ခြင်းဖြစ်ပါတယ်....
၎င်းအား လည်ပင်းညှစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ သည့် အတွက်မိမိကိုယ်ကို ခုခံကာကွယ်သည့် အနေနှင့် 
သားဖြစ်သူအား တံမြက်စည်းဖြင့် တွန်းထုတ်ခဲ့ ရကြောင်းပြောဆိုကာထိုစွပ်စွဲချက်အား ဖခင်ဖြစ်
သူက အပြင်းအထန်ငြင်းဆိုခဲ့ ပါတယ်....
အသက် ၈၈ နှစ်အရွယ်ရှိ ဖခင်ဖြစ်သူက အထိုအမိန့် ချမှတ်ခဲ့ မှုအား အယူခံဝင်ခဲ့ လို့ လွန်ခဲ့ 
သည့် တနင်္လာနေ့ က ကြားနာခဲ့ ပါတယ.်...
ပြောစကားနားမထောင်တဲ့ သားမိုက်...တံမြက်စည်းနဲ့ ရိုက်...
ဘယ်သူတွေများလည်းလို့ အဖေဖြစ်သူက ၈၈ နှစ်၊ သားဖြစ်သူက ၆၅ နှစ်တဲ့ ...
ထိုသားအဖနှစ်ယောက်ဟာ မိုက်ဆက်အမည်ရှိရွာတွင် တစ်အိမ်ထဲအတူနေထိုင်ကြတာဖြစ်ပြီး
ဖခင်ဖြစ်သူက ၎င်း၏ဇနီးဖြစ်သူနှင့် အတူ အောက်ထပ်တွင်နေထိုင်ပြီး သားဖြစ်သူက လည်းသူ့ 
ရဲ့ မိန်းမနှင့် အတူ အပေါ်ထပ်တွင်နေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်...
၎င်းတို့ ဇနီးမောင်နှံစုံတွဲ များဟာ အချိန်တိုင်းနီးပါး ရန်ဖြစ်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ တရားရုံးတော်
တွင် ထွက်ဆိုခဲ့ ကြပါတယ်...
ရုံးတော်တွင်လည်း ၎င်းတို့ နှစ်ဦး ငြင်းခုန်အော်ဟစ်နေလို့ တရားသူကြီးမ မိုက်ကယ်လာဝယ်လ်န်
ဟိုဖာ အနေနှင့် သူမစကားနားထောင်စေရန် နှစ်ကြိမ်တိတိ တားမြစ်ခဲ့ ရပါတယ်....
ဖခင်ဖြစ်သူက ၎င်း၏နေအိမ်တွင်နေထိုင်သည့် သားဖြစ်သူရဲ့ အိမ်ငှားနေထိုင်ခွင့် စာချူပ်အား
ဖျက်သိမ်းခဲ့ တယ်လို့ ဆိုပေမယ့် အသက် ၆၅ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ သားဖြစ်သူကတော့ ပြုစုစောင့် 
ရှောက်ဖို့ လိုအပ်နေတဲ့ မိခင်ဖြစ်သူကိုမထားခဲ့ ချင်တာကိုအကြောင်းပြုပြီး နေအိမ်မှဖယ်ပေးဖို့ 
နောက်ဆုံးတော့ အသက် ၈၈ နှစ်ရှိဖခင်ဖြစ်သူက အမှုအတွက်အယူခံဝင်မှုကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်း
ခဲ့ ပြီး ဒါဏ်ငွေပေးဆောင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပါတယ်...
An 88-year-old German pensioner has acceptedafine of €2,000 for hitting his son, alsoapensioner, withabroom. The judge told the pair, "I'd be ashamed of coming to court with this nonsense."
The court in the Bavarian town of Fürstenfeldbruck had fined the man for attempted criminal assault last December. But the 88-year-old filed an appeal against the verdict, which was heard on Monday. He vehemently denied the charge, though he admitted to pushing his son with the broom in self-defence - because, he said, his son had tried to strangle him.
The father had reportedly already cancelled his son's rental contract, but the 65-year-old had refused to move out, because he did not want to leave his mother, who needed care. The 88-year-old finally withdrew the appeal and decided to pay the fine.
Posted by peter kyaw | at 2:40 AM | 1 comments
Labels: news: thelocals.de
Now that's problem solving! Math teacher born with no arms instructs students with her feet
မွေးစကတည်းကပင်လက်နှစ်ဖက်စလုံးမပါရှိခဲ့ သည့် အမျိူးသမီးတစ်ဦးဟာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်
ကိုအသုံးပြုပြီး စာသင်ကြားပြသနိုင်ခြင်းဖြင့် လူသားတွေအနေဖြင့် (ဆန္ဒရှိမယ်၊ ကြိုးစားမယ်ဆို
လျှင် ) ဘာမဆိုစွမ်းဆောင်ရရှိနိုင်ကြောင်း ကလေးများအား အားကျအတုယူနိုင်စေရန်၊ စိတ်ခွန်
အားများဖြစ်စေနိုင်ရန် ပြသခဲ့ ပါတယ်...
လိတ်ခ်ဝုဒ် အရပ်ရှိ၊ အိုဟိုင်ရို အလယ်တန်းကျောင်းတွင် သင်ကြားပြသနေသည့် မစ္စဂန်နွန်က
သူမရဲ့ ခြေချောင်းများကိုအသုံးပြုပြီး သင်ပုန်းပေါ်တွင်စာရေးခြင်း၊ ကွန်ပြူတာတွင်စာရိုက်ခြင်း
သင်ခန်းစာလေ့ ကျင့် ခန်းစာရွက်များအား ဝေငှခြင်းတို့ ကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်...
သင်္ချာနှင့် သိပ္ပံဘာသာရပ်များသင်ကြားပြသသည့် မစ္စဂန်နွန်ဟာ မက္ကစီကိုရှိမိဘမဲ့ ကလေး
ကျောင်းတစ်ခုတွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့ ရတာဖြစ်ပြီး သူမအသက် ၇ နှစ်အရွယ်မှာ အိုဟိုင်ရိုဒေသမှ
မိသားစုတစ်ခုက မွေးစားခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်...
လက်မရှိလည်း ရှိတဲ့ ခြေထောက်ကိုရအောင်အသုံးပြုပါတယ်...
Inspiring: Mary Gannon,ascience teacher who was born without arms, teaches students using her feet
သူမဟာ ယခုစာသင်ကျောင်းတွင် ယာယီဆရာမအဖြစ် လွန်ခဲ့ သည့် နှစ်က စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ 
တာဖြစ်ပြီး ယခုအခါမှာတော့ ၆ တန်း၊ ၇တန်း၊ ၈တန်းများတွင် အချိန်ပြည့် ဆရာမဖြစ်ကာ "ပျော်
ရွှင်ခြင်းခြေထောက်များ " ဟုမည်ရှိသည့် လိုင်စင်နံပါတ်ပြားနှင့် ကားအားမောင်းကာ ကျောင်းသို့ 
" အခုတော့ ကျွန်မက လုပ်ချင်တာ၊ စိတ်ပါဝင်စားတာကိုလုပ်နေနိုင်ပါပြီ... ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာတစ်
ခုကို ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လုပ်မယ်လို့ စိတ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြီဆိုယင်တော့ ဘယ်သူတားတားမဖြစ်ဖြစ်အောင်
လုပ်နိုင်မှာပါ..." လို့ သူမကဆိုပါတယ်...
သူမအား မသန်မစွမ်းသူကိုခေါ်တာဟာ မပြုသဘောမဆောင်တဲ့ ၊ နှိမ့်ချတဲ့ သဘောမို့ ထိုကဲ့ သို့ 
ခေါ်ဆိုခြင်းအား မကြိုက်ပါဘူးလို့ သူမကဆိုပါတယ်...
ဆန္ဒနဲ့ လုံ့ လဇွဲဝီရိယသာရှိယင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာ ကလေးတွေအတွက် နမူနာ
ကောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ရတာမို့ သူမအနေနှင့် ဝမ်းသာပါတယ်...
Determined: She said she was glad to beagood example to students that they can achieve their dreams
လက်မရှိပေမယ့် လည်း ရှိတဲ့ ခြေထောက်နဲ့ ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ ရပါတယ်...
Problem solving: Ms. Gannon writes on the board usingapen between her toes
" ဒါပေမယ့် လူတွေအနေနှင့် သူမကိုကြည့် ပြီး စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေဖြစ်မယ်...သူတို့ ရဲ့ ဘ၀
တွေကိုပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုယင်တော့ သူမအနေနှင့် မသန်မ
စွမ်းလို့ ခေါ်ခံရလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ သူမကဆိုပါတယ်..."
" ၎င်းတို့ အနေဖြင့် အခက်အခဲများကို အောင်မြင်အောင်ကြိုးပမ်းစွမ်းဆောင်နိုင်ကြောင်း မစ္စဂန်
နွန်က သက်သေပြခဲ့ ပါတယ်လို့ ကျောင်းသားများကဆိုပါတယ်..."
" သင်္ချာမတော်တဲ့ ကျွန်တော့် အတွက် သင်္ချာတော်အောင်၊ ပုစ္ဆာတွေကို ဖြေရှင်းတွက်ချက်နိုင်
အောင် ဆရာမက စိတ်ဓါတ်ခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ်..." လို့ ၆ တန်းကျောင်းသား ဂျေဒင်ဂျွန်
ဆင် က မြေခွေးသတင်းဌာနကိုပြောပြခဲ့ ပါတယ်....
ဘာလိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘာကြီးပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ သင်သာဆန္ဒရှိနေပါစေ ( ပြင်းပြတဲ့ ဆန္ဒ )
ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ သက်သေပါပဲ လို့ လည်း ၈ တန်းကျောင်းသော ကမ်ဘရီဂရစ်ဖင်
က လိတ်ခ်ဝုဒု ပက်ခ်ျ သတင်းကိုပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
ယခင်နှစ်ကတော့ ဒီကျောင်းမှာ ယာယီအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ ပြီး ယခုအခါတော့ 
အချိန်ပြည့် ဝန်ထမ်း ( ကျောင်းဆရာမ ) ဖြစ်ခဲ့ ပါပြီ....
Top teacher: She began working at the school last year asasubstitute but now hasafull time position
ကားလိုင်စင်နံပါတ်ပြားကိုက ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ခြေထောက်တစ်စုံ...လို့ အမည်ရပါတယ်...
Proud: The number plate on Ms Gannon's car reads 'Happy Feet'
ဟာ့ ဒင်း အလယ်တန်းကျောင်းမှ ဆရာများကတော့ မစ္စဂန်နွန်ဟာ ကျောင်းသားတွေအတွက်
တော့ စံပြနမူနာပါပဲဆိုတာ သဘောတူညီကြပါတယ်...
" သူမတောင်ဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ယင် ငါလည်းဖြစ်အောင်လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့ ဆိုတာ လူတိုင်းတွေး
နိုင်ပါတယ်..." လို့ လက်ထောက်ကျောင်းအုပ်ကြီး ဂျိူးတက်ကက် ကပြောကြားခဲ့ ပါတယ်...
A woman born with no arms is proving to children they can achieve whatever they want to - by teaching them with her feet.
Mary Gannon, who works ataLakewood, Ohio middle school, writes on the board, types on her computer and hands out worksheets with her toes.
Ms Gannon, who teaches maths and science, grew up inaMexican orphanage and was adopted by an Ohio family when she was seven.
She joined the school last year asasubstitute teacher and now tutors 6th, 7th and 8th graders full-time, driving to work inacar with the number plate: 'Happy Feet.'
Speaking to Fox 8, she said hopes her determination teaches the childrenavaluable life lesson.
'I’m doing what I wanted to do, what I love to do,' she said. 'And if you set your mind to whatever you want to do and you love to do then - go for it - no one can stop you.'
She said she does not like being called handicapped or even different 'because it hasanegative bias', she said.
But 'if it’s gonna inspire or help people for them to be or do better in their lives then I’m okay with that and I hope that people gain something from me,' she said.
The students said Ms Gannon had shown them that they could overcome their struggles.
'She inspires me because she [shows me] how good I can get at some math problems cause I’m not really that good at math,' 6th grader Jaden Johnson told Fox.
'It teaches you that you can do anything you want to do no matter what,' Cambri Griffin, in 8th grade, told the Lakewood Patch.
Fellow teachers at Harding Middle School agreed Gannon wasagreat example to the student.
'I think people are gonna say, "If she can do it, I certainly can do it",' said Assistant Principal Joe Tackacs.
Posted by peter kyaw | at 1:51 AM |0comments
ရွံရှာဖွယ်၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်၊ မတင့်တယ်...
ဖုံးဝယ်ကြဦးမလား... ငါးထောင်နဲ့ နံပါတ်တစ်ခု၊ ဖုံးတစ်ခုရမယ်....
အသစ်ကိုလည်းမကြံနဲ့ .... အဟောင်းကိုလည်းမပြန်နဲ့ ... ပစ္စုပ္ပန်တည့် အောင်နေ...
ဓမ္မ သို့ မဟုတ် ဘ၀နေနည်းအတတ်ပညာ...
ဟုတ်၏မှန်၏ ကိုယ်တိုင်ကြည့် ...
လေ့ လာမှတ်သား၊ သွားဗဟုသုတ...
လက်စပ်သတ်တော့တစ်မတ်သားဆိုတာ အရပ်သားပါလားကွယ်ရို့ ...
သိပ္ပံနည်းပညာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ကျန်းမာရေးဌာနတို့ လည်း အရပ်သားတွေလို့ ဆိုပါတယ်...
အမေရိကန်တွင် ပြည်နယ်များနှင့် ဗဟိုအစိုးရ အုပ်ချူပ်ရေးအာဏာခွဲဝေပုံ...
သြကာသလောကကြီးရဲ့ ဆန်းကြယ်စွာသာယာလှပပုံက ....
မြတ်နိုးသူရယ်... ချစ်မိုးဆွေခဲ့ တယ်...
မလုပ်ချင်နေ.... သမီးကမော်ဒယ်လား... ၄၄၊ ၂၃၊ ၄၂ ဆိုတော့ ရော့ ဒေါ်လာတစ်သန်း
တစ်သဘောထဲပါပဲ... နောက်ပြန်မလှည့် တမ်းသွားကြမှာပါ....
သုံးကားပေါင်း မိုးအလင်း၊ အဟုတ်တစ်ကယ်ပြခဲ့ တဲ့ ရုံတော်မင်္ဂလာကြီး...
ငယ်စဉ်က အဲဒီလိုဇတ်ရုံမှာ သုံးကားပေါင်းမိုးအလင်းကြည့် ခဲ့ ရတာမို့ အလွမ်းပြေ
ဟုတ်ကဲ့ ... စကားကိုအကုန်မပြောပါဘူး... အစားကိုအကုန်စားပါ့ မယ်...
သြော်... ငှက်ပျောသီးတင်တဲ့ ကား... ကားဆိုမှကား...
နှစ်ယောက်တစ်အိပ်မက်... ဂိမ်းအတူဆော့ ဖက်...
မနိုင်ပေမယ့် လည်း နှစ်ခါတော့ ခွဲမသယ်ပါဘူး...
Posted by peter kyaw | at 11:12 PM | 1 comments
Labels: photos: fun : knowledge
908 Nigerian female pilgrims held in Saudi Arabia ...
Brazilian student sells virginity to build homes f...
'They both seem to control it:' Family finds snake...
အနင်းအနှိပ်ခံမလား... ကမ်းခြေမှာအပန်းဖြေယင်း... ဆင...
Oldest Gymnast, Tallest Dog Enter New Guinness Wor...
Now that's problem solving! Math teacher born with...
ကမ္ဘာတစ်လွှား...အလုပ်အကိုင်မျိူးစုံ... These pi...
Beautiful Road in Ireland
Varieties of Photosအပန်းဖြေစရာ၊ ပုံရိပ်ကမ္ဘာ.... အ...
သမ္မတကြီးကိုချစ်တယ်... စင်္ကြ၀တေးမင်းလို့ တောင်တင်စ...
Mother shaves numbers into quadruplets hair so tea...
ကဲ...မှတ်ပြီလား...ဆရာကြီး... ယူကျုမှာ ကြည့် ရှုသူ...
ကြိုးစားလေ့ ကျင့် ခြင်းရဲ့ ရလာဒ်၊ ပြောင်မြောက...
ဂဏာန်းစတိုင်... ကဲ...နာမည်ကျော် ဂျက်စတင်ဘီဘာထက်တေ...